Kufuridzira kuri pamusoro peKutendeuka, Kwete Kusvika | Martech Zone
Zvakaitika zvakare. Ini ndaive pachiitiko apo munhu ane simba kwazvo aiziva zvekusimudzira zviitiko zvemitambo zvepasi rose aitaura. Akanga achitaura nezve dambudziko iro indasitiri yaive naro mukukwezva itsva mafeni mune chaiyo indasitiri yekumhanya. Uye akabva ataura izwi ... simba.
Kufuridzira - kugona kuve nemugariro pahunhu, budiriro, kana hunhu hwemumwe munhu kana chimwe chinhu, kana iko kuita kwacho.
Chikwata chake chaiongorora mashandisiro e kurovera algorithms kuziva vane simba. Ivo vaizonyorera rubatsiro rweava vanokurudzira kuedza kukwezva vateereri vatsva uye huwandu hwevanhu kuchiitiko ichi. Iyi ndiyo mhando yehurukuro inondifambisa nzungu. Zvekuti vanhu vari muindasitiri yekushambadzira vachiri kutenda kuti hunyengeri ndewe kungobhadhara vamwe vanhu vane hukuru hwekusimudzira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi anondifambisa nzungu. Kufuridzira kuri pamusoro pekugona kuita iva nemhedzisiro, kwete kungosvika.
Hapana chimwe chezvinhu zvinonzi simba rekurovera algorithms kunze uko kunopa chiyero chaicho chekugona kwemunhu kukanganisa sarudzo yekutenga. Dzese dzakanangana nenhamba yevatsitsi, vateveri uye kugona kusvika kune vanhu zvakananga kana kuburikidza nehunyanzvi uye zvikamu. Svika, svika, svika.
Iyi inogara iri nyaya nemaitiro echinyakare ekutengesa. Ivo vane hukuru hwekusvika, saka hazvo kumwe kukanganisa kuchayerwa. Asi ivo havazombofa vakabudirira mukuwana iyo yechokwadi simba ivo vanonyatsoda. Ini ndinoona zvigadzirwa nemasevhisi achisundwa nguva dzese nekudanwa inopisa muindastiri yedu… uye kazhinji ndinogovana ruzivo irworwo nenetiweki yangu. Asi kashoma pandinoita kutenga kubva kune mumwe munhu ane hunyanzvi hwehuwandu hwehuwandu.
Zvinoshungurudza nekuti indasitiri yemutungamiri uyu yatove nesimba rakawanda kudarika zvavaimboda - vanazvo mamirioni evateveri pasirese vanobhururuka mukati uye vanoona chiitiko chavo. Vanhu ava vanopedza mari zhinji uye vanogara kwemazuva akati wandei, vachinakidzwa nemumhanzi, chikafu, pre uye mushure memujaho zviitiko zvakakomberedza mutambo unozivikanwa kwazvo wemujaho munyika.
Kujekesa - Ini handipikisane nekushandisa izvi zvinonzi inopisa. Asi vashandise iwo kukosha kwavanounza chaizvo… vashandise ku takura shoko, kwete ku gadzira. Kana iwe uchida kufurira zvechokwadi vanhu, unofanirwa goverana nyaya kuti vanhu vagone kuve nemanzwiro vanobatanidzwa nekutyaira iyo yekutenga-yekuita sarudzo. Ndiratidze nyaya yemumwe munhu wezera rangu, mari yangu, uye zvandinofarira kuva neruzivo rwechiitiko chako.
Nemamiriyoni evateveri, kune mamirioni enhau dzinogombedzera pane ese vanhu uye kufarira. Ivo havasati vabaya mavari! Ita kuti kugona kwevateereri vako vagadzire uye vagovane mifananidzo nemavhidhiyo, vabvumire kuti vawane uye vateedzane, vape mafoni ekushandisa kuti vawane uye kugovana munharaunda.
Bvumira vateereri vako kuti vagadzire uye vagovane nyaya dzavo - wobva wagovana akanakisa avo kuburikidza neaya mageru nekusvika kukuru Taura nyaya nevateereri kune mhedzisiro inokanganisa.
Tags: simbakusvikamitambo yevaraidzozvetsika vezvenhau
Kuteedzera Zvemukati Kushambadzira ROI yevaDummies